Olalele uyise ngemva kokwenza izifundo zamabhizinisi wenza into yamehlo ekufuyeni. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz uNomathemba Langa, oneminyaka engu-29, uqale ngokufuya izingulube njengoba manje esefuye nezimbuzi nezinkomo epulazini elathengwa wuyise.
UNksz uLanga usezinze eBrits, eNorth West, lapho ipulazi likhona. Uphothule umatikuletsheni eLanglaagte Technical High School ngo-2010, wase edlulela eCTI Education Group, lapho enze khona i-Business Management ngo-2012.
Elanda ngokungena kwakhe ekufuyeni, uthi uyise wathenga ipulazi elingamahekthare awu-326 ngo-2012, nokuthe ngokuqhubeka kwesikhathi naye wagcina esezohlala kulona.
UNksz uLanga enza into yakhe epulazini
“Ngenkathi ngisepulazini ubaba wabeka umbono wokuthi akube khona engikwenzayo. Wangicebisa ngezolimo ngoba ngangingeke ngiloku ngihleli nje kungekho engikwenzayo njengoba ngase ngiqedile izifundo zami ze-Business Management.
“Ngibe sengiya eBaynesfield Training Academy eRichmond (eKZN), ngo-2015. Yilapho-ke engifunde khona kabanzi ngokufuya nangomkhakha wezolimo jikelele,” kusho yena.
Uthi usebenzise ulwazi aluthole lapho ukufuya izingulube, okuyizona aqale ngazo, njengoba esefuye nezinkomo nezimbuzi. Uthi usenezingulube eziwu-15, izinkomo eziwu-30 nezimbuzi eziwu-65.
Umkhiqizo wemfuyo ehlukene we-Inyama Yethu
Inkampani yakhe uyibhalise ngokusemthethweni ngo-2015 ngelinye igama. Kuthe ngasekuqaleni kwalo nyaka wayishintsha igama njengoba manje isibizwa nge-Inyama Yethu (Pty) Ltd.
Uthi yize ziningi izingqinamba abhekane nazo esaqala leli bhizinisi njengokweswela imali yokulisimamisa kodwa ukwesekwa uyise ngaso sonke isikhathi obekunzima ngaso.
“Iyangithokozisa indlela amakhasimende ami athokozela ngayo umkhiqizo wethu, ikakhulukazi inyama yethu yengulube nobhekeni. Njengamanje epulazini sinebhusha lethu esithengisa kulona inyama yengulube, eyenkomo neyembuzi. Ngiphinde ngithengise umkhiqizo wethu kwezinye zezitolo ezizeBrits nakwezinye (izindawo) zaseGauteng,” kusho uNksz uLanga.
Inyama yengulube ye-Inyama Yethu
Amanani enyama yakhe abiza phakathi kukaR550 noR1 200, kuye nokuthi uthenga hloboluni lwenyama futhi engakanani.
Unezisebenzi zesifazane ezimbili ebhusha nezitshudeni ezine eziqeqeshwayo. Ngaphezu kwaloko, minyaka yonke uthatha izitshudeni zaseTshwane University of Technology nakwezinye izikhungo zezolimo ezizocijelwa ukufuya.
UNksz uLanga uthi kuyasiza ukuqonda ukuthi yini omandla nobuthaka kuyona, ukuzicija kulowo mkhakha ofuna ukungena kuwona nokwenza ucwaningo lwento ofisa ukuyenza.
Uthi manje uhlose ukudlondlobala ekufuyeni agcine esengomunye wabafuyi bezingulube abakhulu, akhulise ne-Inyama Yethu.
“Ngifuna nokuthi ibhizinisi lami ligcine seliyi-franchise, kanti okunye engifuna ukukwenza wukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngigcine senginohlelo lokupheka (kwithelevishini) kodwa oluzokwehluka kwezinye ngokuthi lona lugxile enyameni,” kuphetha uNksz uLanga.
Facebook: Inyama Yethu